XOG: Garoonka ay dhisanayso kooxda AS Roma oo ugu dambayntii ogolaanshihii helay? – Gool FM
XOG: Garoonka ay dhisanayso kooxda AS Roma oo ugu dambayntii ogolaanshihii helay?
(Roma) 25 Nof 2017 – Garoonka Stadio della Roma ayaa ugu dambayn u muuqda mid nalka cagaaran loo shidayo si loo dhiso loona furo sanadda 2020, maaddaama ay dowladda Talyaanigu ogolaatay dhismaha buundo muhim ah.
Mashruuca dhismaha garoonka cusub ee Roma ayaa laga shaqaynayay 5-tii sanadood ee ugu dambeeyay, taasoo ku beegnayd markii uu kooxda iibsadey James Pallotta, balse waa lagu celiyay taasoo ay ugu wacnayd waxyaabo la xiriira meesha laga dhisayo garoonka, xiriirka gaadiidka dadwaynaha iyo dabaqyo laba ah oo markii dambe dhismohooda qorshaha laga saaray.
Haatan waxaa soo baxaya warar sheegaya in garoonka qorshaha badani uu ugu dambeyn ogolaanshaha helayo todobaadka soo aaddan, kaddib markii sida la yiri ay dowladdu ogolaatay buundo Tor di Valle ku xiraysa maxaddooyinka kalee tareennada iyo basaska laga raaco.
“Waxaannu ku rajo waynnahay inaannu heshiiska saxeexno dhowrka maalmood ee yar ee soo aaddan,” ayuu yiri Michele Civita oo ka tirsan dowladda hoose ee Roma.
Shaqada dhismaha garoonka Stadio della Roma ayaa deeto bilaabanaysa horraanta 2018 iyadoo furitaankiisa lagu wado fasal-ciyaareedka 2020-21.
GOOGOOSKA: Real Madrid vs Malaga 3-2 (Real oo rafaad ku ribixday)